CELE NEWS Archives - MinSayYar
8th August 2020 Editor
အဆိုတော် ယုန်လေး သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေးနေဝင်းရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
သုံးရက်လောက်နေတော့ နည်းနည်း အနည်ထိုင်စပြုတော့မှ အခြေအနေ ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကြည့်ရင် . (၁) NLD ဖက်က ပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အောင်မြင်မှုအရရှိဆုံးပဲ။ သူ့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေ အခု တစ်ချိန်တည်းမှာ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာတယ်။ အနုပညာရှင် အချို့ကပါ ဒီဗီဒီယိုကို ဝေဖန်ခံရတော့ သူတို့နောက်ကအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုပါ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ ကြိုတင်စုစည်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို နှောက်ယှက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရင် အဆိုပါခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ ကြည်ညိုမှု ကရုဏာ ဖြစ်စေတာ ထုံးစံပဲ။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ရေဂင်ကို သေနတ်သမား ဂျွန် ဟင်ကလီက မအောင်မြင်သော […]
7th August 2020 Editor
လူလောကထဲရောက်လာပြီး တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူမဖြစ်ချင်တာကြောင့် ဂီတကို ဇွတ်လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ တေးရေးတေးဆို အာကာ
ငွေချစ်သူဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တေးရေးတေးဆို အာကာကတော့ မွေးရာမှာ မသန်စွမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဝါသနာပါရာဂီတကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပရိသတ်တေါရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားပါတယ်။ အာကာကတော့ ဘောဒါတွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ငွေချစ်သူသီချင်းလေးကို တင်ဖြစ်ခဲ့ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပါတဲ့။ တေးရေးတေးဆို အာကာကတော့ မွေးရာပါ အမြင်ချို့တဲ့တဲ့ မသန်စွမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိသားစုက ဘာမှမလုပ်ဘဲ မိသားစုနဲ့အတူနေစေချင်ပြီး ကိုယ်တိုင်က လူ့လောကထဲရောက်လာပြီး ဆန်ကုန်မြေလေးမဖြစ်ချင်လို့ ဂီတကိုဇွတ်လုပ်ခဲ့တာပါတဲ့။ သူကတော့ အနိုပ်ကျောင်းတတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဂီတလောက်စိတ်မပါခဲ့ပဲ သီချင်းတွေရေးနေရတာကို ပိုအာသာခဲ့တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မွေးရာမှာ မသန်စွမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဝါသနာပါရာဂီတကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ငွေချစ်သူဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တေးရေးတေးဆို အာကာရဲ့ သူ့ဘဝအကြောင်းပြောပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။ https://www.facebook.com/celegabar/videos/305335957477644/ Source: CeleGabar ####################### Unicode လူလောကထဲရောက်လာပြီး တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူမဖြစ်ချင်တာကြောင့် ဂီတကို ဇွတ်လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ […]
5th August 2020 Editor
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ “ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ညီနန္ဒ
ညီနန္ဒပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဇာတ်ရုပ်ရဲ့ကာရိုက်တာကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ညီနန္ဒကအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်း”‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘ကို ကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီနန္ဒဟာစိတ်သဘောထားဖြူစင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအပေါ်မှာလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူရဲ့လုပ်ငန်းက”‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘ကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ညီနန္ဒရဲ့ကြည်နူးစရာအလှူလေးကိုသာဓုခေါ်လို့ရအောင် အလှူပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Cele Gabar ######################## Zawgyi ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ “ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”ကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ညီနန္ဒ ညီနန္ဒပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဇာတ်ရုပ်ရဲ့ကာရိုက်တာကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ညီနန္ဒကအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်း”‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘ကို ကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီနန္ဒဟာစိတ်သဘောထားဖြူစင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအပေါ်မှာလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူရဲ့လုပ်ငန်းက”‘ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်း”‘ကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒရဲ့ကြည်နူးစရာအလှူလေးကိုသာဓုခေါ်လို့ရအောင် အလှူပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဘဘဘိုကလေးတင့်အောင်အား မေသန်းနုနှင့် သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင်တို့ သွားရောက်ကန်တော့
ဘိုကလေးတင့်အောင်အား မိခင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုနှင့် သားဖြစ်သူတို့ သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့ကြကြောင်း မင်းသန့်မောင်မောင်က ဓာတ်ပုံများဖြင့် သူ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကတွင် တစ်သက်တာဂုဏ်ထူးဆောင်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်သော မြန်မာနိင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ၏နာယကကြီး ဘဘဘိုကလေးတင်အောင်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံဂါ၀ရပြုကန်တော့ရခြင်းတွက် အလွန်အမင်း ၀မ်းမြောက်၀မ်းသာဖြစ်ရကြောင်းလည်း သူက ရေးသားထားသည်။ ပြည်မြန်မာ ####################### ဘိုကလေးတင့်အောင်အား မိခင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုနှင့် သားဖြစ်သူတို့ သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့ကြကြောင်း မင်းသန့်မောင်မောင်က ဓာတ်ပုံများဖြင့် သူ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကတွင် တစ်သက်တာဂုဏ်ထူးဆောင်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်သော မြန်မာနိင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ၏နာယကကြီး ဘဘဘိုကလေးတင်အောင်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံဂါဝရပြုကန်တော့ရခြင်းတွက် အလွန်အမင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရကြောင်းလည်း သူက ရေးသားထားသည်။ ပြည်မြန်မာ
ကြိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို ကို ဒဲ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး…(ရုပ်သံ)
ဖြူဖြူထွေး ကတော့ Tik Tok ဗီဒီယို များ ရိုက်ကူးကာ နာမည်ကျော် လူသိများလာခဲ့ သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ အရမ်း ကို အောင်မြင် တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတူတဲ့အရည်အချင်းများနဲ့လူကြီးမိဘများအပေါ်မှာပါသိတတ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပို နေရ တာ ပါ ။ ကြော်ညာ မှာ ဆိုရင် ဖြူဖြူထွေးရယ် လို့ ပြောစမှတ်တွင် ရလောက်အောင်ထိ သူမ ရဲ့ ကြော်ညာတွေကတော့ လက်မလည်အောင်ပဲ ရိုက်ကူးနေရပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရရှိလာပေမဲ့လည်း မာန်မာနမရှိ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်ရင်းလေးကြောင့် တနေ့ထက် တနေ့ ပရိတ်သတ် အားပေးမှုကို ပိုမို ရရှိ လာခဲ့သူပါ ခြိမ့်ကေကိုကတော့လက်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေသူပါ။MyanmarIdolသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ဦးသိန်းတန်ကသူ့ကိုငှက်ပျောသီးထုတ်ကျွေးခဲ့ရာကနေBananaဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါ။ခြိမ့်ကေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အကောင်းပြောတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် နည်း ပါးပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကပဲ များခဲ့ပါတယ်။ […]
4th August 2020 Editor
ပရိသတ်တွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်မျှော်နေကြ တဲ့ သူမ ရဲ့ သီချင်းလေးကို MV နဲ့တကွ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ချပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
အခုလက်ရှိ ထိပ်တန်းမင်းသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ ငယ်ဘ ဝအိပ်မက်ကတော့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက သူမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က Art Of Depression အဖွဲ့နဲ့ သီချင်းတွေသီဆိုခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖွေးဖွေးက သရုပ်ဆောင်ဘက် ကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးက ချစ်ရတဲ့ အကယ်ဒမီသုံးဆုရှင် ဖွေးဖွေးရယ် လို့ ဖြစ်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးရဲ့ ငယ်ဘဝအိပ်မက်လေး ကတော့က သူမကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို Music Video အဖြစ် ရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေဆီ ချပြချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရင်း Music Video လေးတစ်ပုဒ်ကို ချပြလာပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက ထွန်းနောင်ဆင့် ရေးပေးပြီး သူမကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ […]
ချစ်မေမေကို ချွေးနည်းစာနဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်တခုနဲ့ ဂါရဝပြုလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို…
Myanmar idolမှာ သီချင်းဝင်ပြိုင်ရင်း Facebookမှာ လူသိများလာတဲ့ ဆယ်လီ ခြိမ့်ကေကို banana ကိုတော့ သိပြီးဖြစ်မှာပါ…။ သူကတော့ လူအများရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း သူယုံကြည်ရာ အလုပ်ကို ရှေ့ဆက် ကြိုးစားနေသူဆိုလည်း မှားပါဘူး…။ ခြမ့်ကေကို ဟာ မိဘတွေ အပေါ် မှာလည်း သိတတ် လိမ္မာသူတစ်ယောက်ပါ…။ မကြာသေးခင် ကာလကလည်းအမေ့အတွက် ရွှေဆွဲကြိုးကြီးနဲ့ ဂါရဝပြုခဲ့ ပါသေးတယ်။ သူတတ်အားသမျှ အလှူဒါနလေးတွေလည်း မကြာခန လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့မှာကျရောတဲ့ ဝါဆိုလပြည့်နေ့လေး မှာ မိခင်ကို ရွှေလက်ကောက် ထပ်မံ ကန်တော့လိုက်တယ် ဆိုတာ ယခုလို မျှဝေ လာခဲ့ပါတယ်။ ဝါဆိုလပြည့်နေ့လေး မှာ ကျွနိတော်ရတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေစုပြီ အမေကိုလက်ကောကိလေးဝယ်ကန်တော့လိုက်ပါတယ်အမျိုးတို့ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ […]
အခြေအနေ မဟန်ရင် ဆိုက်ကား နင်းသင့် နင်းရ မှာပဲ လို့အစချီကာ ကိုဗစ်ကာလမှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော် “မျောက်ရှုံး”
လူရွှင်တော်မျောက်ရှုံး ကတော့ နာမည်ကျော် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ Five Stars ရဲ့ ပင်တိုင်လူရွှင်တော် တစ်ဦးဖြစ်သလို အနုပညာသက်တမ်း ၁၃ နှစ် ကျော်အထိ အနုပညာအလုပ်များလုပ်ကိုင်ရင်း ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပါ။ယခုလို ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာတော့ ကိုမျောက်ရှုံးတစ်ယောက် အပြင်မှာအနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ရတဲ့အတွက် Five Stars Entertainment Page ကနေ ဟာသဗီဒီယိုအတိုလေးတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဒီကာလ မှာကတော့ ဘာအလုပ် မှလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမယ့် အနုပညာသမား ဆိုတာ တစ်ခုခု လုပ်နေရမှ အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ မရှိတာရှိတာ အသာထား အနုပညာတစ်ခုခု လုပ်နေရင်း နဲ့ငတ်နေတာကို သိပ်သဘောကျတာ။ အွန်လိုင်းမှာ5stars entertainment ဆိုပြီး ပေ့ချ်လည်း ဖွင့်ထားတယ် အဲ့မှာ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်အောင် ဟာသလေးတွေ တင်ဆက်ပေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အိတ်စိုက်ရတာ ရှိပေမယ့် […]
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော‌‌ေလ‌း ခေးဆက်သွင်ကိုတော့ နှင်းဆီ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့သလို သူရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေးဆက်သွင်ကတော့ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေကို မကြာခဏဆိုသလို မျှဝေလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ“အဖြူရောင်ကို မြင်အောင်ကြည့်ရင် တကယ်ရှိပါတယ်…. သူတို့မှားနေရင် လမ်းပြဖို့ ကိုရှိသလိုကိုဆိုးနေရင် သူတို့ကထိန်းသိမ်းပြီးသားပါ…. ပိတောက်ပန်းလေး လမ်းမှာတွေ့လို့ လှလိုက်တာလို့ မပြောမိစေနဲ့ ကားရပ်ပြီး မရရအောင် ခူးပေးတဲ့သူမျိုးတွေ…. နတ်ပြည်ကနေ ငရဲထိ ကိုသွားချင်ရာသွား သူတို့ပါပြီးသား…..ပေးစားချင်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလိုပေးစား အမှန်တရားက အမြဲမခါးပါဘူး…. သူငယ်ချင်းထက် မိသားစုဆိုပိုမှန်မယ် …single Mom နဲ့ သူ့သားနှစ်ယောက်ပါ” ဆိုပြီးတော့ စနောက်ရေးသားထားတာပါ။ ခေးဆက်သွင်ကတော့ စိုပြေမြင့်နဲ့ဘုန်းဆက်သွင်တို့နဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေနဲ့အတူ single Mom နဲ့ သူ့သားနှစ်ယောက်ပါ ဆိုပြီးတော့လည်း နောက်ပြောင်ထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားသူတွေဘယ်လိုပြောပြော သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုကတော့ […]
ပရိသတ်အချစ်တော် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ပိုင်တံခွန်ကတော့ ဒီနေ့ အိမ်သစ်‌လေးတစ်လုံး နဲ့ ကား တစ်စီးကို အဖေ နဲ့အမေ အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ Surprise လုပ်ဖို့ အမျိုးမျိုးလိမ်ပြီးခေါ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတော့ အဖေလည်း ငို အမေလည်း ငိုပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်လေးပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစအချိန်ပေါ့ ကျွန်တော့် မိဘတွေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိအောင်ကို ဆင်းရဲ အတိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေအမေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာက ကျနော်တို့အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာ ဘာမှန်းမသိအောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်က ကျနော်တို့ ရန်ကုန် စပြီးပြောင်းလာတဲ့အချိန် ။ကျောက်မြောင်းမှာ တိုက်ခန်းလေးငှားပြီး သုခလမ်းက တိုက်အောက်‌လေး မှာ ဒီ သားသမီး […]